Fepetran’ireo depiote amin’ny mpanelanelana : « miala aloha Rajaonarimampianina vao miresaka isika… » | NewsMada
Fepetran’ireo depiote amin’ny mpanelanelana : « miala aloha Rajaonarimampianina vao miresaka isika… »
Hentitra ary mazava ny fepetra savaranonando. “Miala aloha ny filoha Rajaonarimampianina. Miala koa ireo olom-boatendrin’izao fitondrana izao. Miala avokoa ary rava ny governemanta miaraka amin’ny praiminisitra sy ireo loholona, anisan’izany Rakotovao Rivo”, hoy ny lahatenin’ireo depiote ho an’ny fanovana, tetsy amin’ny kianjan’ny 13 mey, omaly. Notaterin’izy ireo tamin’izany ny dinika nifanaovana tamin’ny FFKM, omaly, ka nametrahana io fepetra fialan’ny mpitondra iray manontolo io. “Tatero any amin’ny filoham-pirenena any fa nanitsakitsaka lalàmpanorenana miverimberina izy. Tsy nanaraka ny didim-pitsarana ary koa tsy nametraka fitoniana teto amin’ny firenena ka tokony hiala…”, hoy ihany ny depiote. Nanana solontena fito izy ireo nihaona tamin’ireo eo anivon’ny fiangonana efa-tonta. Mbola fepetra hapetrak’izy ireo amin’ny mety ho fanelanelanana ataon’ny sehatra iraisam-pirenena koa izany fialan’ny mpitondra izany, mialoha ny dinika rehetra hatao, handaminana ny firenena.
Tsy tatry ny vela-pandrika
Hatreto aloha izany, nampisinda ny ahiahy sy ny feo niely ny lahatenin’ireo depiote ny amin’ny ambara fa fivilian’ny tolona eny amin’ny kianjan’ny 13 mey. Tafiditra ao anatin’izany ny ambara fa fihetsiky ny lehiben’ny antoko misy azy ireo, niteraka resabe tato ho ato. Mbola nohamafisin’izy ireo fa tolon’ny depiote 73 izao ary miainga amin’ny feon’ny vahoaka. Izany hoe, tsy tafiditra amin’ny vela-pandrika tany ho any ireto depiote ireto ny amin’ny handravana na koa hampivakiana ny Tim sy ny Mapar, manoloana ny tolona iraisana.
Etsy andaniny, tsy azo ihodivirana ny hijoroan’ny governemanta tsy mitanila, hitantan –draharaha sy hampandeha ny fifidianana. Tsy maintsy miainga amin’ireo depiote 73 anefa izany governemanta ho an’ny fampiraisam-pirenena izany amin’ny maha maro anisa azy ireo. Tsy misy fanonganam-panjakana koa anefa izany rehetra izany fa manaraka ny lalàmpanorenana, araka ny lahateny ihany.
Hanao fanambarana lehibe ny depiote…
Tsiahivina fa naka ireo mpiasam-panjakana eny amin’ny minisiteran’ny Fanabeazam-pirenena, Anosy, sy ny Fampianarana teknika, eny Ampefiloha, izy ireo, omaly. Nihazo ny HCC nanafatra ireo mpiasa fa mbola misy vary mangatsiaka, amin’ny tokony hametrahan’ny filoham-pirenena fialana koa ao Ambohidahy ao. Nanao diabe niainga avy etsy Ambohijatovo izy ireo avy eo, nihazo ny kianjan’ny 13 mey. Nanao tahaka izany koa, naka ny mpiasan’ny sampandraharaham-panjakana, ireo any amin’ny faritra. Anisan’izany ny tany Antsiranana sy Mahajanga, omaly.